AKHRISO: Waxyaabihii La Yaabka lahaa ee laga diiwaan geliyay doorashadii Puntland | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA AKHRISO: Waxyaabihii La Yaabka lahaa ee laga diiwaan geliyay doorashadii Puntland
AKHRISO: Waxyaabihii La Yaabka lahaa ee laga diiwaan geliyay doorashadii Puntland
Doorashadii Puntland ee shalay la soo gaba gabeeyay ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha kala duwan ee magaalada Garoowe, walina waxaa la dareemayaa raadkii doorashada, sida uu ku soo warramay wariyaha BBC-da Axmed Cawil.
Intii uu socday ol’olaha ayuu jiray culeyska ugu badan, waxaana waddooyinka laga dareemayay saxmad iyo ciriiri, iyadoo ay jirtay cabasho xoog leh oo ka imaaneysay shacabka.
Dadka dan yarta ah ayaa aad uga sheegtay tirada gaadiidka ku soo batay jidadka, halka ciidamada amaanka waddooyinkana ay aad u mashquuleen maalmahaas.
Sida ay sheegeen dad fara badan oo magaalada ku nool, doorashadan ayaa ahayd mid ka saameyn badan aadna uga duwan doorashooyinkii hore ee Puntland ka dhici jiray.
Dadka magaalada soo buux dhaafiyay waxaa ku jira kuwo doorashada awgeed uga yimid dalalka qurbada, waxaana ka mid ah Yoonis Maxamed Waaberi, oo Mareykanka ka yimid, wuxuuna la hadlay BBC-da.
“Doorashada magaalada isbaddal weyn bay u keentay, saddexdii sano ee lasoo dhaafay waan imaanayay Garoowe, laakiin sannadkaan sidii hore ma aha dadkuna way ka badan yihiin tiradii la arki jiray”, ayuu yiri.
Doorashadan ayaa sidoo kale Magaalada Garoowe u horseedday inuu u soo xaroodo dhaqaale fara badan.
“Waxyaabaha cajiibka ah ee aan arkay waxaa ka mid ahayd inaan xakameyn weynay tirada dadka u imaanayay iney wax cunaan. Meel walba ayaan kuraas u dhignay, markii dambena waxaan ku dhawaannay inaan gabi ahaanba faraha kala baxno”.
Meelaha kale ee uu ciriiriga faraha badan ka jiray waxaa ka mid ahaa hoteellada la seexdo oo si aad ah loo buux dhaafiyay.
Hoolalka shirarka ayaa iyagana ka mid ahaa ganacsiyada sida weyn u macaashay intii lagu guda jiray ol’olaha doorashada.
Hase ahaatee, Saxmaddii ayaa hadda ka yaraatay magaalada waxaana aan jirin dabaal dagyadii iyo gawaaridii ay sameecadaha ku xirnaayeen ee dhex wareeji jiray magaalada, ka hor xilligii doorashada.